အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ဖွယ်အခြေအနေထိဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ သွေးဝမ်းပြဿနာ - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
ဇွန် 22, 2018 Charlie Laohapand, M.D.
သွေးဝမ်းသွားကာ အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရသောအခြေအနေသို့ ရောက်ရှိခဲ့သော်လည်း အချိန်မီဆေးရုံသို့ရောက်ရှိခဲ့ကာ တိကျသော ရောဂါရှာဖွေမှုနှင့် ထိရောက်သောကုသမှုတို့ကြောင့် ပြန်လည် ကျန်းမာလာခဲ့သော ကိုဗင်းစင့်စိုးမြင့်
ကိုဗင်းစင့်စိုးမြင့်တစ်ယောက် ရုံးမှာထိုင်နေစဉ် ရုတ်တရက်သွေးဝမ်းသွားပြီး သတိလစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များဟာ သတိလစ်နေသော ကိုဗင်းစင့်ကို အရေးပေါ်ဆေးရုံကြီးသို့ ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါ တယ်။ ချက်ချင်းဆိုသလို အရေးပေါ်အခြေအနေအတွက် အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သော်လည်း ရောဂါ ဇစ်မြစ်ကို ရှာမတွေ့နိုင်ဘဲ ကိုဗင်းစင့်ဟာ အတော်လေး နာမကျန်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ မိသားစုဝင်များဟာ ကိုဗင်းစင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေတိုးတက်မှုကို မတွေ့ရသဖြင့် ကိုဗင်းစင့်အတွက် အရေးပေါ် ဆေးကုသမှု ပေးဖို့ စဉ်းစားခဲ့ရပါတော့တယ်။ ဆစ်မီတဝေ့ဆေးရုံကြိး မှ Air Ambulance ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုဖြင့် ဘန်ကောက် ဆစ်မီတဝေ့ ဆေးရုံကြီးသို့ ပို့ဆောင်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။ အရေးပေါ်အခြေအနေဖြင့် ရောက်ရှိလာသော ကိုဗင်းစင့်စိုးမြင့် နှင့် ဇနီးသည် မနန်းစိုးတို့က ၎င်းတို့ ဆေးကုသမှုခံယူခဲ့ရစဉ်တွေ့ကြုံခဲ့ရ သော အခြေအနေကိုပြန်လည်ဝေမျှခဲ့ပါတယ်။
ဆစ်မီတဝေ့ဆေးရုံကြီးတွင် လာရောက်ဆေးကုသမှုမခံယူခင် တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရတဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ
ကိုဗင်းစင့်စိုးမြင့် ရုံးမှာထိုင်နေရင်းနဲ့ သွေးဝမ်းသွားတယ်။ သွေးဝမ်းသွားတဲ့အခါမှာ နေလို့မကောင်းဘူးဖြစ်လာတယ်။ အဲ့တော့ အခန်းထဲမှာ ခဏထိုင်ပြီးတော့နေ နေတဲ့ အချိန်မှာပဲ Faint ဖြစ်သွားတယ်။ အဲ့လိုပျောက်သွားတဲ့အခါမှာရုံးက
အဖော်တွေကနေပြီးတော့ အရေးပေါ်ဆေးရုံကြီးကိုခေါ်သွားတယ်။ အဲ့ဒီမှာရောက်တော့ ချက်ချင်းဆိုသလို
တော့သူတို့သွန်သွားတဲ့ သွေးတွေကို သွေးပြန်သွင်းပြီး တော့ အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ Cause ကဘာလဲလို့ဆိုတာကို အဖြေရှာမရဘူး။အဲ့ဒီမှာ သုံးရက်လောက်ဒီအတိုင်းအဖြေမရဘဲနဲ့ ဒီလိုပဲနေခဲ့ရတယ်။
ကိုဗင်းစင့်စိုးမြင့်၏ဇနီး အဲ့ဒီသုံးရက်အတွင်းမှာလည်း သွေးပုလင်းကို၈ပုလင်းသွင်းလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်လူကလည်း weak ဖြစ်ရင်းသွေးသွင်းရင်း weak ဖြစ်ရင်း သွေးသွင်းရင်းနဲ့ပဲ သံသရာလည်ခဲ့တယ်။ ဆိုတော့အခြေအနေမထူးခဲ့ဘူးပေါ့နော်။ cause ကို ရှာမတွေ့ခဲ့ဘူးပေါ့။
ဆစ်မီတဝေ့ဆေးရုံသို့ရောက်ရှိလာစဉ် အရေးပေါ်ဆေးကုသမှုခံယူခဲ့သော အတွေ့အကြုံ နှင့် ကျန်းမာရေးအခြေအနေ
ကိုဗင်းစင့်စိုးမြင့် ရောက်ရောက်ချင်းမှာပဲ ဒီလိုအပ်တဲ့ ရောဂါ ရှာဖွေမှုတွေကို ချက်ချင်းဆောင်ရွက်တယ်။ ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ မှန်ပြောင်းကြည့်တဲ့ကိစ္စတွေ အကုန်လုံးကို ချက်ချင်းလုပ်ပေးတယ်၊လုပ်တယ်။ အဲ့ဒီအခါမှာ အဖြေကိုလည်း သိပ်မကြာဘူးသိလိုက်ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ ဒီရောက်ပြီး နှစ်ရက်အတွင်းမှာတင် ICU ထဲမှာ နှစ်ရက်အတွင်းမှာတင်ကို သိသိသာသာတိုးတက်မှုရှိလာတယ်ပေါ့နော်။
ကိုဗင်းစင့်စိုးမြင့်၏ဇနီး ကျွန်မဆို ICU ထဲရောက်တယ်ဆို စိတ်ထဲမှာ မြင်ကြည့်လိုက်တာ ICU ထဲမှာဆိုလိုရှိရင် A kind of worrying stage ပေါ့နော်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ကိုကြည့်လိုက်တော့လည်းပဲ လန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်နေတော့
ဟယ် ICU ထဲမှာနေတယ်ဆိုပင်မဲ့လည်း လန်းဆန်းတယ်ဆိုတော့ တကယ်ကို treatment ကလည်းထိရောက် တယ်။နောက်ပြီးတော့ ဘယ်လိုပြောမလဲ “Caring” ပေါ့နော် Nurses တွေကောအကုန်ဆရာဝန်တွေရဲ့တကယ့်ကြည့်ရှု့စောင့်ရှောက်မှုကလည်အင်မတန်ကောင်းတယ်ဆိုတာကို တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။
ဆစ်မီတဝေ့ဆေးရုံတွင် ဆေးကုသမှုခံယူဖို့ ရွေးချယ်လိုက်ခြင်း
ကိုဗင်းစင့်စိုးမြင့် ကျွန်တော် က၂၀၁၄ ခုနှစ်ထဲက ဆစ်မီတဝေ့ မှာ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း ၊ ဆေးကုသမှုခံယူ ခြင်းများဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီမှာ ဆက်ပြီး ကျန်းမာရေးကုသဖို့ ရွေးချယ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါ တယ်။
Dr. Charlie နှင့် သူ့ရဲ့ အဖွဲ့သားများ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအပေါ် အကိုနှင့်အမရဲ့ ထင်မြင်ချက်
ကိုဗင်းစင့်စိုးမြင့် အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကတော့ တကယ်ကိုမြန်ဆန်ပါတယ်။ ဒီမှန်ပြောင်းကြည့်တဲ့ ကိစ္စတွေဘာတွေဆိုမှာလည်း ဘာမှနာကျင်မှုမရှိဘူး။လူနာအတွက် အရမ်းကိုသက်သာတယ်ပေါ့။နာကျင်မှုတွေဘာတွေဘာမှလည်းမသိရဘူးနောက်ပြန်နိုးတဲ့အချိန်သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်း အားလုံးကပြီးစီးနေပြီး နောက်ပြီးတော့ အဖြေတွေကိုလည်း မကြာခင်မှာပဲချက်ချင်းသိရတယ်။ ပြုစုကုသမှုက အရမ်းကို စေတနာပါပါနဲ့ လုပ်ဆောင်ပေးတာတွေ အရမ်းကျေနပ်ပါတယ်။
ကိုဗင်းစင့်စိုးမြင့်၏ဇနီး မိသားစုဝင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ကတော့ သူ့ရဲ့ဒီ Treatment က တိုးတက်မှုကို within an hour မှာ သူတို့လုပ်ဆောင်မှုတွေပြီးသွားတယ်။ပြီးတော့တစ်ရက်ချင်းတစ်ရက်ချင်းမှာ တိုးတက်မှုတွေရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မိုလို့ ကျွန်မတို့က တော်တော်လေးကို ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ Hopeless situation လိုဖြစ်လောက်နီးပါးကနေပြီးတော့ တိုးတက်လာတာကို တွေ့ရလို့ ကျွန်မတို့အရမ်း ကျေးဇူးတင်တယ်။
Dr. Charlie ကော သူရဲ့ Team တစ်ခုလုံးရော နောက်ပြီးတော့ ဒီဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက သူတို့ Treatment ပေးတာကောင်းယုံတင်မဟုတ်ဘူး စေတနာနဲ့ တအားကိုလုပ်ပေးကြတဲ့ Team တစ်ခုလုံးကို ကျေးဇူးတင်တယ်။ လူနာကို ဘယ်လိုမျိုးသက်တောင့်သက်သာလေးထားပေးရမလဲ ဆိုတာ သူတို့မှာ အမြဲတမ်း ways လေးတွေရှိ တယ်။ ကျွန်မလဲ သူတို့ရဲ့ လူနာကို ပြုစုတာတွေကို ကြည့်ပြီး ကျွန်မ အမျိုးသားနေမကောင်းတဲ့ အခါမှာ ဘယ်လို ပြုစုရမလဲဆိုတာ ကျွန်မလေ့လာမိတယ်ပေါ့နော်။
ကိုဗင်းစင့်စိုးမြင့်၏ဇနီး အဖြေသည်လည်းပဲ တိကျတယ် လူတွေအားလုံးကလည်းစေတနာပါတယ်ဆိုတဲ့ လူလည်းမပင်ပန်းဘူးလေးနော်။ အဖြေတိကျတဲ့အတွက်ကြောင့်မိုလို Right diagnosis ကိုလုပ်နိုင်တယ်။Diagnosis ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်လို့ရှိရင် လူနာကဘာပဲပြောပြောသက်သာတာပဲ စမ်းတဝါးဝါးလုပ်တာမဟုတ်ဘူးလေ။ ဆိုတော့ အဲ့ဒါအတွက်ကို ဆစ်မီတဝေ့ကို သွားကြပါလို့တော့ ကျွန်မပြောချင်တယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ ဒီ Risk ရမှတင်မဟုတ်ဘူး Medical checkup ၊Annual Medical checkup ကိုလည်း ဆစ်မီတဝေ့ကိုသွားပါ။ Risk ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တောင်မှ ကျွန်မတို့ဒီ ကနေပြီးတော့ Risk အရမ်းဖြစ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ဆိုရင်လည်းပဲ AA (Air Ambulance) Service တွေကို Provide လုပ်ပေးနေတဲ့ဆေးရုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိုလို့ ချက်ချင်းခေါ်လိုက်တာနဲ့ ဒီ Air Ambulance က လာနိုင်ဆိုတော့ အဲ့ဒါကလည်း အားသာချက်ပဲလို့ ကျွန်မထင်ပါတယ်။
ကိုဗင်းစင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်ပြီး Dr.Charlie မှ ရောဂါရှာဖွေဆောင်ရွက်ခြင်းများ
Dr.Charlie မစ္စတာဗင်းစင့်အရင်တုန်းကအဆစ်အမြစ်နာရောဂါဖြစ်ဖူးပါတယ်။ spondyloarthropathy လိုမျိုး ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ဒီတစ်ခါတော့ သူဝမ်းသွားရင်း သွေးပါလာတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အစာအိမ်နဲ့ အူလမ်းကြောင်းသွေးယိုစိမ့်ခြင်းလို့ယူဆပါတယ်။ အရိုးအဆစ်နာကျင်မှုပျောက်ကင်းအောင် အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေ သောက်နေရတဲ့အတွက် အစာအိမ်ထဲက သွေးယိုစမ့်ခြင်း (သို့) အူသိမ်မှ သွေးယိုစမ့်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် အူမကြီးကနေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် လိုအပ်တဲ့ အစာအိမ်နဲ့ အူလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ သွေးယိုစမ့်မှုကို စစ်ဆေးပါတယ်။ အစာအိမ်လမ်းကြောင်းကြည့်ပြွန်နဲ့ အူမကြီးလမ်းကြောင်းကြည့်ပြွန် (၂) ခုလုံးရဲ့ အဖြေကတော့ အူမကြီးထဲမှာ ရောင်ရမ်းနေတာတွေ၊ အနာတွေအများကြီးရှိနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးက ရောဂါပိုးမျိုးစုံကနေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ – နာတာရှည် ရောဂါပိုးတွေ အခုလိုမျိုး အူမကြီးအနာများဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
Dr.Charlie ဘယ်လိုရောဂါလည်းဆိုတာကို အတိအကျသိဖို့အတွက် ဇီဝစစ်ဆေးမှု သွေးနှင့် ဝမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပါတယ်။ ဝမ်းနှင့် သွေးစစ်ဆေးချက်အရတော့ အူမကြီးမှာ ရောဂါပိုးမရှိဘူးဆိုတာကို ပြသနေပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ နောက်ဆုံးဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ အဆစ်အမြစ်ယောင်ရောဂါနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ အူရောင်ရမ်းရောဂါပဲဖြစ်ပါတယ်။ အူမကြီးက ရောင်ရမ်းမှုကို ထိန်းချူပ်နိုင်တဲ့ immunosuppression ဆေးဝါးနှင့် ကုသဖို့ အရမ်းကို လိုအပ်ပါတယ်။ဒီရောဂါဟာ သွေးယိုစမ့်တဲ့အထိ အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ (အထူးသဖြင့် ဝမ်းထဲမှာသွေးပါနေခဲ့လျှင်)
ဒီအတွက် အစာအိမ်နဲ့ အူလမ်းကြောင်းဆရာဝန်ထံတွင် ပြင်ပခန္ဓာကိုယ်စစ်ဆေးခြင်းနဲ့ အခြားစစ်ဆေးမှု တို့ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။မစ္စတာဗင်းစင့်ကဲ့သို့သော ပုံမှန် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထမဟုတ်တဲ့ အူမကြီးရောဂါ (သို့) အူမကြီးအတွင်းရှိအလုံးအကြိတ်နှင့် အနာများကို ထိရောက်စွာ ကုသပေးနိုင်ပါတယ်။
Charlie Laohapand, M.D. Summary: